BigCommerce မှအီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအသစ် ၆၇ ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2016 Douglas Karr
BigCommerce ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝဖော်ပြရန်နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းလှပပြီးအပြည့်အ ၀ တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာခေါင်းစဉ် ၆၇ ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ခေတ်မီကုန်သွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်သန့်ရှင်း။ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအင်တာဖင့်ကို အသုံးပြု၍ လက်လီရောင်းသူများသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စျေးဝယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်အမျိုးမျိုးသောကတ်တလောက်အရွယ်အစား၊ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးသော e-commerce themes များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်လီဈေးကွက်မှာအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသာမကဘဲစျေး ၀ ယ်သူအားအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမူဘောင်အသစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်ယနေ့ခေတ်မီဆန်းပြားသောအွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူများအားမယုံနိုင်လောက်အောင်ပထမဆုံးထင်မြင်စေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအီလက်ထရွန်းနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်ထက်သူတို့ရောင်းအားထက်ပိုရောင်းကြလိမ့်မည်။ မှ Tim Schulz, ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ် BigCommerce.
ခေတ်မီကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပြသခြင်းကိုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး themes အသစ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအရွယ်အစား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခင်းအကျင်းအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် -
မိုဘိုင်းစျေးဝယ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းများ - ကိရိယာများအားလုံးတွင်ပိုမိုရောင်းချရန်အဆင်သင့်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တည်ဆောက်ထားခြင်း၊ အသစ်သော themes များသည်စျေးဝယ်သူများအတွက်မည်သည့်စက်ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေဝယ်သည်ဖြစ်စေဝယ်ယူရန်အတွက် storefront အသွင်အပြင်ကိုသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ချောမွေ့စွာနှင့်ရိုးရှင်းသော Customization - လက်လီရောင်းချသူများသည် font နှင့် color palette များ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ အရောင်းရဆုံးနှင့်အရောင်းရဆုံးစုဆောင်းခြင်းများ၊ လူမှုမီဒီယာ icon များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်သူတို့၏စတိုးဆိုင်၏အသွင်အပြင်နှင့်အသွင်အပြင်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြုပြင်နိုင်သည်။
ထည့်သွင်းထားသောမျက်နှာအသွင်အပြင်ရှာဖွေမှုလုပ်ဆောင်နိုင်မှု - ပါ ၀ င်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာရှာဖွေခြင်းသည်ဖောက်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာစီစစ်ရန်၊ ရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပြောင်းလဲမှုကို ၁၀% အထိတိုးတက်စေသည်။
One- စာမျက်နှာကုန်ပစ္စည်း Optimized - အကုန်လုံးကိုတုန့်ပြန်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ဖော်ပြပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွေ့အကြုံသစ်မှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း ၁၂% အထိတိုးတက်လာသည်။
BigCommerce ၏အခင်းအကျင်းအသစ်များသည် ယနေ့မှစ၍ သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဒီလနှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ သုံးစွဲသူများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခင်းအကျင်းအသစ်များကို Theme Marketplace တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးစျေးနှုန်းများမှာဒေါ်လာ ၁၄၅ မှ ၂၃၅ အထိရှိသည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့အခင်းအကျင်း ၇ ခုကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
ထုတ်ဖော်: ကျနော်တို့ကတစ် ဦး Affiliate ပါပဲ BigCommerce.
Tags: BigCommerceBigcommerce themes များe-commerce အကြောင်းအရာများအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေးအကြောင်းအရာများpixel ပြည်ထောင်စု